» डिम्याट खाता नविकरण गर्न सिद्धार्थ क्यापिटलको आह्वान, असार ३१ सम्म नगरेमा फ्रीज हुने
डिम्याट खाता नविकरण गर्न सिद्धार्थ क्यापिटलको आह्वान, असार ३१ सम्म नगरेमा फ्रीज हुने
१४ असार २०७८, सोमबार १२:५०
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटल तथा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले डिम्याट नविकरण शुल्क बुझाउन आह्वान गरको छ । क्यापिटलले विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमार्फत डिम्याट खाता खोलेका सम्पूर्ण हितग्राहीहरुलाई आ.व. २०७७/०७८ सम्मको डिम्याट संचालन वार्षिक शुल्क बुझाउन अनुरोध गरेको हो ।
पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढिरहेको समयमा हितग्राही खाता खोल्नेहरु २० लाख भन्दा बढि रहेका छन् । सक्रिय हितग्राही खाता मात्रै १८ लाखभन्दा बढि छन् । सिद्धार्थ क्यापिटलले वार्षिक शुल्क प्रत्येक आ.व. १०० (अक्षरेपी एक सय मात्र) भुक्तानि गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार असार ३१ गतेभित्रमा नविकरण शुल्क बुझाउन अनुरोध गरेको छ ।
क्यापिटलले शुल्क बुझाउन सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, नारायणचौर, नक्साल स्थित कार्यालय तथा सिद्धार्थ बैंकका सम्पूर्ण कार्यालयहरुमा गई बुझाउन सकिने जनाएको छ । साथै मोवाइल वालेट ई–सेवा, आइएमई पे, खल्ती प्रभु पे र कनेक्ट आइपीएस जस्ता विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिने जनाएको छ ।
तोकिएको समयभित्र डिम्याट नविकरण शुल्क नबुझाएमा हितग्राहीको डिम्याट खाता फ्रिज गरिने क्यापिटलले जनाएको छ । साथै मेरोशेयर सेवा लिएका हितग्राहीहरुले सेवा संचालनमा आएको एक वर्षको अवधिभित्र नविकरण गरिसक्नु पर्ने र सो समयावधिभित्र नविकरण नभएमा सो सेवा स्वतः बन्द हुने क्यापिटलले जानकारी दिएको छ ।